Axmed Madoobe iyo Barre Hiiraale oo Muqdisho ku kulmay – Radio Daljir
Diseembar 18, 2015 5:30 b 0
Somalia, December 18, 2015-(Daljir)_ Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa kulan kula yeeshay magaalada Muqdisho Siyaasiga Col. Barre Aaden Shire (Hiiraale).
Kulankan oo ka dhacay Hoteelka uu magaalada ka deggen yahay Barre Hiiraale ayaa la sheegayaa iney soo diyaariyeen Ra’aysul wasaaraha dalka iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo in dhowaalaba u kala deb qaadayay.
Wada hadalkan oo albaabbadu u xirnaayeen ayaa sida ay dadka ku dhow-dhow sheegayaan waxaa diiradda lagu saarayay sidii laysaga soo dhowaan lahaa halka markii hore la kala joogay loona dhammayn lagaa wixii dhaliyay colaadda ku dhex martay magaalada Kismaayo.
Shir weyne la doonayo in lagu soo gabagabeeyo xurgufta dhexdooda ayaa lagu madlan yahay inay dhawaan ka dhacdo magaalada Kismaayo,si loogu dhameeyo Kala aragti duwanaanshaha mudada soo jiitamayey.
Labadan nin ayaa ku kala aragti duwanaa in muddo ah habka loo wajahayo dhismaha maamulka Jubba-land,iyadoo dhowr goor uu magaalada Kismaayo iyo duleedkeedaba ku dhex maray dagaal qasaara badan dhaliyay.